' Diiwaangelintu maxay muujinaysaa ''. - Wargane News
Home Somali News ‘ Diiwaangelintu maxay muujinaysaa ”.
‘ Diiwaangelintu maxay muujinaysaa ”.
” Diiwaangelintu maxay muujinaysaa ”.
Diiwaan-gelintu waa nooc ka midda waxyaabaha la yidhaahdo xog-uruurinta , xog uruurin kastana marka la hello waa lagga hadliyaa waxaana la iska waydiiyaa suaalo ka dhasha xog uruurinta , suaalahaas ayaana sabab u noqda helista xalalka loo baahan yahay
Hadaba Diiwaangelintan maalinta dhawayd lasoo bandhigay hadaynu si yar oo kooban gees uga yara eegno .
Somaliland waxay ahaan jirtay laba qaybood oo isu dheelitiran kuwaas oo kala ah Barri iyo Galbeed .
1- Hargaysa , Berbera iyo Boorama waa Galbeed .
2- Burco , Ceergaabo iyo Laas-caanood waa Barri .
Hadaba labadaa qaybood oo isku dhadhawaa dhinaca Dadka ayay diiwaan-gelintani muujinaysaa in wax wayni iska badaleen sababtoo ah
Gobolka Maroodi-jeex waxaa iska diiwaangelisay 499,000 .
Goboladda Togdheer , Sool iyo Sanaagna 481 ,000 .
Marka la kala jarro wadarta 3 Gobol ee Barri iyo Gobolka Maroodji-jeex , waxaa soo baxaysa in Gobolka Maroodi-jeex dheer yahay 3 Gobol ee Barri 18 kun oo cod .
Arrinta labaad ee Diiwaan-gelintan ka muuqataa iyana waxay tahay , In Gobolka Sool aad usoo kabanayo maxaa yeelay Diiwaangelintii horre waxaa iska diiwaangeliyay 64 kun oo qof halka imikana 45 kun ,iyadoo is badalkaasi ku dhacay muddo aad u kooban .
Waxa kale oo iyana is diiwaangelintani muujinaysaa in Gobolka Sanaag oo ah Gobolka ugu baaxad wayn Somaliland hadana yahay Gobolka Dadka ugu yari iska diiwaangeliyeen , iyadoo tiradda guud ahaan Gobolka iska diiwaangelisayna ay tahay mid aan u dhigmin baaxadda Gobolka iyo qiyaasta lagga filayo
Sidaa darteed Gobolka Sanaag waxaa ka muuqata soo kabasho la’aan iyo dib udhac loo baahan yahay in xoog looga gacan qabto
Khudbadii madaxweyne Biixi ka jeediyay labada Aqal oo dhammaystiran
Somaliland: Booliska Somaliland Oo Astaantooda Ku Xardhay Baabuurtii Qaadka Lagu Qabtay.
Somaliland:Wasiir Maxamuud Xaashi oo ka warramay taariikhda iyo mabda’a uu ku dhisanyahay xisbiga KULMIYE iyo tayada murrashaxiisa Madaxweynaha Mudane, Muuse Biixi.
Somaliland: Cali Khaliif Oo Qiray Inuu Waayay Jid Dhaama Inuu Wada Hadal La Furo Dawladda Somaliland